Showing 101-120 of 916 items.
कम्मर र पेटतिर बोसो जम्मा हुनु समस्या निकै बढ्दो छ । पेटमा वा कम्मरमा बोसोको मात्रो धेरै भयो भने धेरै प्रकारका रोग निम्तिन्छन् । सुन्दरतामा पनि कमी ल्याउँछ । पेट र कम्मरतिर लागेको बोसो घटाउने साता सजिला आइडिया निम्नप्रकार छन् �
प्रकाशित मितिः आश्विन, 1, 2076
इटहरी/ हाम्रो शरीरमा सामान्यभन्दा कम शक्ति हुनुलाई थकान भनिन्छ । भिटामिन बी को कमि ले गर्दा हामीलाई थकाई लाग्ने हुन्छ । धेरै शारीरिक परिश्रम गर्दा थकाइ लाग्छ । कहिलेकाहीँ क्षणभरका लागि मात्र थकाइ लाग्न सक्छ भने कहिले लामै समयस
प्रकाशित मितिः भदौ, 27, 2076
इटहरी/ डेंगुको बारेमा पहिलो पटक सन् १७८० मा वर्णन भएको पाइन्छ। यो रोग दोस्रो विश्वयुद्घको समयदेखि विश्वमा समस्याका रुपमा आएको हो। सन् १९५० मा फिलिपिन्स र थाइल्यान्डमा यसको माहामारी भएको थियो। यसको भाइरस सविन भन्ने व्यक्तिले �
इटहरी/ मुटुबाट रक्तसञ्चार हुने बेलामा रक्तनली (आर्टरी)को भित्तामा पर्ने दबाबलाई रक्तचाप भनिन्छ । सामान्यतया मानिसको रक्तचाप १२०/८० मिलिमिटर अफ मर्करी हुनुपर्छ । अर्थात मुटुको माथिल्लो चाप १२० र तल्लो चाप ८० हुनु भनेको उत्तम र�
विद्यालयमै पुग्छ ‘भिजन भ्यान’
विराटनगर/ बालबालिकाको आँखामा रहेको समस्या पहिचान गरि उपचार पद्धती सहज बनाउन अब विद्यालयमै आँखा परीक्षण हुने भएको छ । विराटनगर आँखा अस्पतालले घुम्ती शिविरको रुपमा भिजन भ्यानमार्फत विद्यालयमा पुगेर बालबालिकाको आँखा परीक्षण ग
इटहरी/ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) इटहरी उपमहानगरपलिका ३ नम्बर वडा कमिटिले बृहत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। तीन नम्बर वडा कमिटिले स्थानीय पुराण चौकमा बुधबार स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हो। स्वास्थ्य शिविरमा श्रील
इटहरी/ मदिरा सेवनका कारण संसारमा प्रतिवर्ष २.५ देखि ३ लाखको ज्यान जाने गरेको तथ्यांकले देखाएका छन् । यो समस्या १५ देखि ६० वर्षसम्मका पुरुषमा धेरै पाइएको छ । मदिराले शरीरका सम्पूर्ण अंग र प्रणालीलाई असर गर्छ । विशेष गरी रक्तसञ्
मोरङ / विराटनगरस्थित प्रदेशिक अस्पतालको आकस्मिक वार्डमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप बढेको छ । मौसममा आएको परिवर्तनको कारण भाइरल ज्वरोको बिरामी बढेको अस्पतालका डा.सङ्ज्ञा ज्ञवालीले बताए । अस्पतालमा दैनिक ३० बढी भाइरल ज्वरोका
इटहरी/ डेंगु ज्वरो एक गम्भीर फ्लु जस्तो बिमारी हो, जसले जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई पनि असर गर्छ। डेंगु ज्वरोका लक्षणहरू अन्य धेरै भाइरल फेवरहरूलाई ओभरल्याप गर्दै छन्। त्यस कारण डाक्टरहरूद्वारा यसलाई बारम्बार गलत निदान गरिन्छ�
प्रकाशित मितिः भदौ, 7, 2076
एजेन्सी / वैज्ञानिकहरुले यस्तो एक परीक्षण विधि पत्ता लगाएको दावी गरेका जसअनुसार कुनै पनि व्यक्तिको आउँदो दश वर्षभित्रमा मृत्यु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहिले नै भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ, त्यो पनि रगत परीक्षणबाट । यो परीक्षणमा ८० प
डेङ्गुका बिरामी पाल्पामा पनि
बेझाड /&nbsp;पाल्पामा डेङ्गुका बिरामी फेला परेका छन् । साउन महीनामा मात्रै दुई बिरामी फेला परेका हुन् । गत वर्ष भदौमा जिल्लामा डेङ्गुका सात बिरामी भेटिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी माधव ज्ञवालीले जानकारी दिए । ड�
काठमाडौं / स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका २० हजार कर्मचारीले अझै समायोजनपत्र बुझेका छैनन् । हाल सेवामा २७ हजार चार सय १७ स्वास्थ्यकर्मी छन् । तीमध्ये गत महिना सात हजार कर्मचारीले मात्रै समायोजनपत्र बुझेका छन् �
बीबीसी, भदौ १ । दशकौँसम्म इबोलाले मानिसमा ठूलो त्रास पैदा गरेको छ। जसलाई यो रोग लाग्छ ती मध्ये धेरै कम मात्र बाच्न सफल हुन्छन्। तर यो अवस्थामा परिवर्तन आउला कि जस्तो छ। कङ्गोका इबोला बिरामीहरूमा सफल क्लिनिकल परीक्षण गरेका वैज्�
1756 पटक पढिएको
इटहरी/ यदि विश्वभरका सबै मानिस सधै&zwnj;ंका लागि शाकाहारी भए यसको प्रभाव जलवायु, वातावरण, हाम्रो स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला? १. सन् २०५० सम्म विश्वभरका मानिस शाकाहारी भए बर्सेनि कम्तिमा ७० लाख जीवको ज्यान जोगिनेछ। पशुपन�
प्रकाशित मितिः श्रावण, 32, 2076
काठमाडौं / नेपालका औषधि उद्योगले सोझै चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरे औषधि करिब ४० प्रतिशत सस्तो पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । मुलुकमा करिब ८० प्रतिशत औषधिको कच्चा पदार्थ भारतबाट आउँछ । नेपालमा बर्सेनि ५५ अर्ब रुपैया�
इटहरी / ९ महिनापछि आकर्षक रुपमा जन्मिनुअघि आमाको कोखमा रहेको बच्चा कुन अवस्थमा कसरी बसेको हुन्छ भन्ने विषयमा सबैलाई खुलदुली हुन सक्छ। कोखमा रहेको शिशु केबल त्यहाँ बस्ने र समयक्रम अनुसार बृद्धि भएको हुन्छ। तर यतिमै सिमित हुदैन
औषधि नै पचाउन सक्ने मलेरिया परजिवी फैलिँदै
बिबिसी/ दक्षिण एशियाका देशहरुमा औषधिलाई नै पचाउन सक्ने औलो (मलेरिया) परजिवी तीव्र रुपमा फैलिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।&nbsp; ब्रिटेन र थाइल्याण्डका शोधकर्ताहरूले गरेको अध्ययनले मलेरियाका&nbsp; प्रमुख &zwnj;औषधिलाई प्रतिरोध गर्न सक्
इटहरी/ हड्डी अथवा त्यसको समग्र रुप अस्थिपञ्जरबाट नै कुनै पनि प्राणी चलायमान हुनसक्छ। हाडले शरीरलाई एउटा आकार दिन्छ। हाडलाई चलायमान वा गतिशील बनाउन जोर्नी आवश्यक हुन्छ। घुँडामा पनि त्यस्तै किसिमको हड्डी हुन्छ। घुँडालाई दाया�
2344 पटक पढिएको
क. मानसिक समस्या भएका व्यक्तिले जानी/नजानी जघन्य अपराध गर्न सक्छन्ःमानसिक बिरामीले कहिलेकाहीं ज्यानै मार्ने गरेको पनि पाइएको छ। खासगरी साइक्याट्रिक बिरामी (मेनिया, सिजोफ्रेनिया, गाँजा सेवन) ले जघन्य अपराध गरेको पाइन्छ। मानसि
हेपटाईटिस लागेको कसरी थाहा पाउने ?
काठमाडौं/&nbsp;आज २७ जुलाई अर्थात् विश्व हेपटाईटिस दिवस । देश भर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ । हेपटाईटिस भनेको कलेजोको रोग हो । सामान्य भाषामा हेपटाईटिस लाग्नु भनेको कलेजो बिग्रनु हो । कलेजो बिग्रनुका विविध कारणहरू हुन्छन् �
2827 पटक पढिएको